လင့်ခ်များဖြင့် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မှန်ကန်စွာ ငွေရှာနည်းကို Semalt ဟောပြောသည်- အန္တရာယ်များနှင့် ၎င်းတို့ကို ရှောင်ရှားရန် နည်းလမ်းများ
လင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းသည် ပို၍ပို၍ အသုံးမဝင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏကြားသိရသည်။ သို့သော်လည်း၊ ယေဘူယျအားဖြင့် SEO နှင့် အထူးသဖြင့် link ranking factor ရှိသရွေ့၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် များစွာရှိပါသေးသည်။ လင့်ခ်များကို ရောင်းချနည်းနှင့် ၎င်းတို့နှင့်အတူ သင်မည်မျှဝင်ငွေရနိုင်သည်- ဤအရာသည် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြောင်းအရာအပေါ် အခြေခံပါမည်။
SEO ကိရိယာများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ငွေရှာနိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား။ SEO ဖြင့် ငွေရှာရန် အခြားနည်းလမ်းများစွာကို သင်ကြားဖူးပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ Semalt ၏မိတ်ဖက်အစီအစဉ်. ဤပရိုဂရမ်မှတဆင့်၊ သင်သည် အကောင်းဆုံး SEO tool ကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် SEO ဖြင့် ငွေရှာနိုင်သည်။ SEO Personal Dashboard.
ယနေ့ဆောင်းပါးကိုစရန်၊ လင့်ခ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အချက်သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိမရှိ ဦးစွာစစ်ဆေးကြည့်ကြပါစို့။
လင့်ခ်ရောင်းချရငွေသည် ပထမ iPhone ထက် ပိုဟောင်းသည်။ သို့သော်ယခင် optimizers များသည် backlinks အရေအတွက်ကိုပိုမိုစိုးရိမ်ခဲ့ပါကယနေ့သူတို့၏အရည်အသွေးသည်ခြွင်းချက်မရှိအလေးပေးထားသည်။ ယခုအချိန်မှစ၍၊ ပြင်ပလင့်ခ်များကို မထင်မှတ်ဘဲ ဝယ်ယူမှုနှင့် ဆက်တင်အတွက်၊ သင်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ ပိတ်ဆို့မှုအောက်တွင် လျင်မြန်စွာ ကျရောက်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ "လင့်ခ် ပရိုမိုးရှင်း အလုပ်လုပ်သလား" နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်စဉ် ထိတ်လန့်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်၊ သင့်လင့်ခ်ကို မှန်ကန်စွာတည်ဆောက်ပါက၊ ပိတ်ပင်ခံရမည့်အန္တရာယ်မှာ အနည်းငယ်မျှသာ သို့မဟုတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သည်။
Sape 2021 SEO နှင့် Link Building Market Research အရ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူထားသော ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 90% သည် filter များထိမှန်ခံရနိုင်ခြေနည်းပါးသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အမှန်စင်စစ်၊ လင့်ခ်မြှင့်တင်ရေး၏ အနှစ်သာရမှာ အတူတူပင်ဖြစ်သည်- ဆိုဒ်၏အခွင့်အာဏာနှင့် လူကြိုက်များမှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အလှူရှင်ဆိုဒ်များမှ လင့်ခ်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် အမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ နောက်ခံလင့်ခ်များကိုရောင်းချခြင်းသည် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုအား ငွေရှာရန် အဓိကနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သော 5-7 နှစ်ခန့်ကကဲ့သို့ ရေပန်းစားခြင်းမရှိသော်လည်း ဤဝင်ငွေအရင်းအမြစ်၏အောင်မြင်မှုသည် ဝယ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ၏ သတိထားမှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
လင့်ခ်များတွင် ငွေရှာခြင်းသည် အကျိုးရှိပါသလား။
အထက်ဖော်ပြပါ Sape 2021 လေ့လာမှုတွင် ဖြေဆိုသူများ၏ 90% ကျော် - ထင်မြင်ချက်ခေါင်းဆောင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အေဂျင်စီကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနတွင်းအဖွဲ့များသည် လင့်ခ်များဖန်တီးကာ လင့်ခ်များကို ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ အထူးကုများထဲတွင် နောက်ခံလင့်ခ်များကို အသုံးမပြုသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိပါ။ ၎င်းသည် ပြင်ပချိတ်ဆက်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းထက် တန်ဖိုးနည်းမည်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်မံသက်သေပြပါသည်။
ဘယ်လင့်ခ်တွေက ဝယ်လိုအားရှိလဲ၊ အဲဒါတွေကို ရောင်းခြင်းအားဖြင့် သင်ဘယ်လောက်ဝင်ငွေရနိုင်လဲ ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
အငှားလင့်ခ်များကို လင့်ခ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကို လျင်မြန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အရင်းအမြစ်ပေါ်တွင် နေရာချထားပါသည်။ စည်းကမ်းအရ၊ ဤယာယီလင့်ခ်များအတွက် ငွေပေးချေမှုကို တစ်လအတွက် သတ်မှတ်ထားပြီး နေ့စဉ် ငွေထုတ်ပါသည်။ ဤယာယီလင့်ခ်များ၏ အဖိုးတန်မျိုးကွဲများထဲမှ တစ်ခုသည် အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အကြောင်းအရာနှင့် ကိုက်ညီပြီး ၎င်းနှင့် သဘာဝကျကျ ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဆက်စပ်လင့်ခ်များဖြစ်သည်။
အချက်များစွာပေါ် မူတည်၍ လင့်ခ်များ၏စျေးနှုန်း ကွဲပြားသည်။ ယာယီလင့်ခ်များကိစ္စတွင်၊ ရင်းမြစ်ပေါ်ရှိ စာမျက်နှာအရေအတွက်နှင့် ၎င်းတို့ထံသို့ လင့်ခ်အရေအတွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည် (၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်အချို့ရှိသော်လည်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်)။
ထာဝရလင့်ခ်များကို အရင်းအမြစ်တွင် (များသောအားဖြင့် စာသားများတွင်) လွှင့်တင်ပြီး စာမျက်နှာတည်ရှိသရွေ့ ထိုနေရာတွင် ရှိနေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဤလင့်ခ်များအတွက် ပေးချေမှုသည် ငှားရမ်းမှုအတွက်ထက် များစွာမြင့်မားသော်လည်း ၎င်းကို တစ်ကြိမ်သာ လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ အမြဲတမ်းလင့်ခ်များ၏ကုန်ကျစရိတ်သည် ယာယီလင့်ခ်များထက် များစွာမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆက်စပ်ပလက်ဖောင်းများတွင်၊ ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ဖော်မက်ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့်၊ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း ရှိသည်။ မကြာခဏဆိုသလို၊ ထိုကဲ့သို့သော ပလပ်ဖောင်းများသည် အမြဲတမ်း လင့်ခ်အမျိုးအစား ၄ ခုကို ရည်ညွှန်းသည်-
သတင်းလင့်ခ်များ။ ၎င်းတို့သည် ငွေရှာရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်- ဆိုက်ပေါ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုတွင် လင့်ခ်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည် အချိန်များစွာမယူပါ။ ငွေပေးချေမှုမှာ တစ်ကြိမ်သာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးများတွင် လင့်ခ်များ။ ဤလင့်ခ်အမျိုးအစားများသည်လည်း အရင်းအမြစ်-အလွန်အကျွံမဟုတ်ပါ- ဝဘ်မာစတာသည် လက်ခံသူရင်းမြစ်ထံသို့ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာလင့်ခ်တစ်ခုဖြင့် သူ/သူမ၏ အရင်းအမြစ်အကြောင်း အသုံးဝင်သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် (စည်းကမ်းအတိုင်း၊ ၎င်းကို optimizer မှ ပံ့ပိုးပေးသည်) ပို့စ်တင်ပါသည်။
အရင်းအမြစ်၏ခေါင်းစဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဂျာနယ်ဆောင်းပါးများတွင် လင့်ခ်များ။ ထိုသို့သောလင့်ခ်များသည် အားထုတ်မှုအချို့ လိုအပ်လိမ့်မည်- အကြောင်းအရာကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤငွေရှာနည်းတွင် ပြန်လာခြင်းသည် ဥပမာအားဖြင့် သတင်းတွင် လင့်ခ်တစ်ခုထည့်ခြင်းထက် ၃ ဆ ပိုများသည်။
ဖိုင်မှတ်တမ်းရှိ လင့်ခ်။ ဤလင့်ခ်များသည် SEO အန္တရာယ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ Wizard သည် အညွှန်းပြုပြီးသော စာမျက်နှာများပေါ်တွင် နောက်ခံလင့်ခ်များကို နေရာချပေးသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်၊ သင့်လျော်သောပမာဏမှ ငှားရမ်းခြင်းလင့်ခ်များကို ရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်ဝေသူအနေဖြင့် သင်သည် စျေးနှုန်းကို သင်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
လင့်ခ်များတွင် ငွေရှာခြင်း၏ အန္တရာယ်များနှင့် ၎င်းတို့ကို ရှောင်ရှားနည်း
လင့်ခ်ကို ခြယ်လှယ်ခြင်း၏ အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်မှာ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြင့် စစ်ထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ပြိုကျသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းရှိလင့်ခ်များသည် SEO ရှုထောင့်မှ အသုံးမဝင်တော့ပေ။
အများသူငှာ အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို မပေးဆောင်သော ကြော်ငြာနှင့် လင့်ခ်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက် သီးသန့်ဖန်တီးထားသော ဝဘ်ဆိုက်များသည် ပိတ်ဆို့မှုများ လျင်မြန်စွာ ကျရောက်နေသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ရင်းနှီးမှုကို ရှောင်ရှားရင်း လင့်ခ်များကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေရှာနည်း။
ငွေရှာရန်လင့်ခ်များကိုရောင်းချခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် လိုက်နာရမည့် နည်းစနစ်အတိအကျကို မသိပါက အောင်မြင်ရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကိုသာ လိုက်နာပါ-
လင့်ခ်လဲလှယ်မှုတွင် ဈေးနှုန်းများထက် အဆများစွာ မြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည် မည်သည့်နေရာမှ သွားလိုသော ပစ်မှတ်မဟုတ်သော ကြော်ငြာသူများကို ဖယ်ရှားရန် ကူညီပေးပါမည်။ သင့်အကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပရောဂျက်များနှင့် တတ်နိုင်သမျှ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားပါ - UX ဒီဇိုင်းအကြောင်း ဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင် polycarbonate တည်ဆောက်ပုံများအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို တွေ့ရှိရခြင်းမှာ ထူးဆန်းပါသည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကို လှည့်စားရန် မကြိုးစားပါနှင့်၊ သင့်တွင် 20% "အလွတ်" စာမျက်နှာများနှင့် 80% "ရောင်းရန်" အကြား မျှတစေရန် သင့်တွင် လုံလောက်သော အကြောင်းအရာရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
ကျောက်ဆူးလင့်ခ်များဖြင့် သယ်ဆောင်မသွားပါနှင့် ကျောက်ဆူးမပါဘဲ ပို့စ်တင်ခြင်းသည် ပိုလုံခြုံပါသည်။
တိုက်ရိုက်ကြော်ငြာသူများအတွက် စီးပွားဖြစ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခု ဖန်တီးပါ၊ ယင်းမှာ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသို့ မလိုအပ်သော အချက်ပြမှုများကို သတိရှိရှိဖြင့် အခကြေးငွေပေး၍ လင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းတွင် သင်ပါဝင်လိုကြောင်း ၎င်းတို့အား ပြောပြပါ။
အများကြီးကောင်းတယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော နောက်ခံလင့်ခ်များကို မထည့်ပါနှင့်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်လလျှင် အကြောင်းအရာ ၅-၁၀ ယူနစ်ကို ထုတ်ဝေသည့် သတင်းအချက်အလက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအတွက်၊ လင့်ခ် ၅ ခုသည် လုံလောက်သည်။ ရောင်းချရန် အကောင်းဆုံး လင့်ခ်အရေအတွက်သည် စာမျက်နှာတစ်ခုလျှင် နှစ်ခုထက် မပိုပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘယ်လောက်ပဲ အရှိန်မြှင့်ချင်နေပါစေ ဖြည်းဖြည်းချင်းရောင်းပါ။ မကြာခဏ အရောင်းသွက်ခြင်းသည် ငွေရှာရန် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်ကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထံ အချက်ပြနိုင်သည် ။ ပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်။
သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ငွေရှာရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်အားလုံး၏ အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုမှာ ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ငွေရှာရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်တော့၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိခြင်းသည် သူ့ဘာသာသူအဆုံးသတ်မဟုတ်ပေ။ သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို လူသိများစေရန်နှင့် အခြားအသုံးဝင်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် ဤအားသာချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ရန် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကြော်ငြာခြင်းအကြောင်း စဉ်းစားရပါမည်။
သင့်ဆိုဒ်ကို အရောင်းမြှင့်တင်ရာတွင် ပြဿနာရှိပါသလား သို့မဟုတ် ၎င်းကို ငွေရှာနည်းကို သင်မသိပါ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဘာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ Semalt ၏မိတ်ဖက်အစီအစဉ်သင့်ဆိုဒ်နှင့် ငွေရှာရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကို သင်ရှာဖွေရန် သေချာပါသည်။
ထို့အပြင်၊ သင့်ဆိုဒ်တွင် ပြဿနာများရှိနေပါက၊ ၎င်းကိုအသုံးပြု၍ ဦးစွာပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ DSD ကိရိယာ အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။ ဒီနည်းအားဖြင့် သင့် website ကို ပိုကောင်းတဲ့ အနေအထားရောက်အောင် သင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျ သိလာပါလိမ့်မယ်။
လင့်ခ်များကိုရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိရန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်၊ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ-
လင့်ခ်များကို ရောင်းချသည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခု ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။ ၎င်းတွင် မြင့်မားသောကိုးကားချက်နှင့် PR၊ ကောင်းမွန်သောအသွားအလာကောင်းပြီး အညွှန်းကိန်းရှိ စာမျက်နှာအများအပြားရှိသင့်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော လဲလှယ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဝယ်ယူသူများကို ရှာဖွေပါ။
လင့်ခ်များ၏ စျေးနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ ဒိုမိန်းနှင့် အရင်းအမြစ်များ၏ အသက်၊ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ CSI၊ အသွားအလာ၊ တည်နေရာနှင့် ၎င်းတို့၏ နံပါတ်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ပြိုင်ဘက်များ၏ စတော့စျေးနှုန်းများ၊ SEO ဖလှယ်မှုများ၏ အကြံပြုချက်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အာရုံစိုက်နိုင်သည် (စည်းကမ်းအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် BigData ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်)၊ ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း သင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စာမျက်နှာတစ်ခုလျှင် လင့်ခ် ၁-၂ ခုထက် ပိုမလွှင့်ပါနှင့်။
လင့်ခ်ကို အကြောင်းအရာစာသားတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး အရင်းအမြစ်ကိုယ်တိုင်၏ ခေါင်းစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် သံသယရှိသောနေရာများ - လောင်းကစား၊ ကာစီနိုများ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အရင်းအမြစ်များတွင် မပါဝင်သင့်ပါ (Yandex သည် esotericism၊ အိပ်မက်စာအုပ်များ၊ horoscopes နှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို မပေးဆောင်သော အခြား pseudo- သို့မဟုတ် pseudo-scientific topics များတွင် Yandex သည် အသုံးပြုသူများအား အကြောင်းအရာကို မပေးဆောင်နိုင်သော သိပ္ပံနည်းကျ ဘာသာရပ်များဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ သံသယရှိမှုအပေါ် အခြေခံပါတယ်။)
ကြက်ဥအားလုံးကို ခြင်းတောင်းတစ်ခုထဲမှာ မထည့်ပါနဲ့။ သင့်တွင် အရည်အသွေးပြည့်မီသော၊ ပစ်မှတ်ထားပြီး အဆက်မပြတ်တိုးပွားနေသော ပရိသတ်နှင့် တီထွင်ထားသော အရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိပါက၊ ၎င်းကို ငွေရှာရန် မငြင်းပါနှင့် - အကြောင်းအရာဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများ၊ တီဆာ သို့မဟုတ် နဖူးစည်းများကို ရောင်းချပါ (ဤလုပ်ငန်းကို အမြတ်အစွန်းရအောင် လုပ်နည်း - ဝင်လာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြပါမည်)။
ဒီနေ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မင်းရဲ့ အမြင်က ဘယ်လိုလဲ။ ၎င်းကိုမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ ထို့အပြင် သင့်တွင် မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များရှိပါက သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ တိုက်ရိုက်